About us - Qingdao Yuanhengtong Imishini Co., Ltd.
Izindwangu zemishini yendwangu
Machining isikhungo nc izingxenye
Shaft machining izingxenye
Isungulwe ngo-2012, i-Qingdao Yuanhengtong Machinery Co., Ltd. igxile ku-R & D nokukhiqizwa kwemishini engajwayelekile, nemishini eyenziwe ngokwezifiso enobungane bezintambo zokukhiqiza ezizenzakalelayo.
Izingxenye ezingezona ezijwayelekile ukusika, izingxenye zensimbi ezinemba kahle, izingxenye zemishini, imishini engenasici engagqwali, izingxenye zensimbi engagqwali ukucubungula, izingxenye ezenziwa ngomshini nezokukhiqiza. Imikhiqizo ingaphezu kuka-1000 izinhlobo. Imikhiqizo isetshenziswa kabanzi emikhakheni ehlukahlukene enjenge-instrumentation, ukuxhumana, imishini yokulungisa, izingxenye zezimoto, njll. Ikhwalithi yomkhiqizo isendaweni ehamba phambili phakathi kozakwabo basekhaya.
Izinto zokusetshenziswa ezikhiqizwayo ziyinsimbi engagqwali, insimbi, ithusi, i-aluminium, njll., Okuhle kakhulu ekucubunguleni izingxenye zensimbi engagqwali, ukucubungula kwangaphakathi nangaphandle, kanye nokucubungula izingcezu zezingxenye zethusi, i-aluminium nezinsimbi ezahlukahlukene. I-Qingdao Yuanhengtong Machinery Co., Ltd.inamandla amakhulu wobuchwepheshe. Isikhungo semishini esithuthukile esisezingeni eliphakeme esivele sikhona, ukunemba okuzenzakalelayo kwe-CNC, i-lathe yokulawula izinombolo, i-instrument lathe, i-punch grinder neminye imishini yokukhiqiza esekelayo, ukucubungula ukucubungula kufinyelela ku-0.005 mm, futhi ukuhlolwa okuhambisanayo kuqediwe.
Ngolwazi lwethu olucebile lobuchwepheshe namandla esayensi nezobuchwepheshe, sihlala sakha izinto ezintsha, kusukela ekwakhiweni komkhiqizo kuye ekukhiqizweni kwezingxenye, ukuhlinzeka abasebenzisi ngemikhiqizo yokusebenza emihle kakhulu. Futhi ngedumela elihle kakhulu nensizakalo esezingeni eliphakeme, kuyathandwa ngamakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe. Samukela ngobuqotho amakhasimende aseChina nakwamanye amazwe ukuthi eze ukutshala imali, uku-oda, ukucubungula ikhomishini, ukuklama nokucubungula. Yenza machining, ukucutshungulwa kwensimbi, ukucutshungulwa kwensimbi, izesekeli zehadiwe, ukucutshungulwa kwensimbi engagqwali. Sizimisele ukubambisana ngobuqotho nozakwabo ekhaya nakwamanye amazwe ukudala brilliant ndawonye!